I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Mamta
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Mamta izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Indawo yami ikude nesiphithiphithi kodwa iseduze ne-Cafe's, izindawo zokudlela, amabhikawozi, ama-nursery nezibhedlela. Ilungele imindeni eza ngamaqembu noma imibhangqwana efuna izinsiza eziphelele nobumfihlo ngokunethezeka. Ifulethi liyindawo evulekile enezindawo zokulala ezinethezekile, itafula lokudlela, ikhishi elihlomele neshawa.
Silungele noma yiluphi uhlobo lolwazi oludingekayo ukuze sihlale isikhathi eside ezinkampanini njengendlu yezivakashi noma ikilasi lebhizinisi eleza imisebenzi.
Ifulethi lisesitezi sesi-2 futhi lifinyelela ngezitebhisi. Ifulethi lakhelwe ukufanela yonke iminyaka nezinhlobo ezinefenisha yesitayela samakoloni. Imibhede kuwo womabili amakamelo ilingana neNkosi. Umatilasi waphansi owengeziwe ungahlinzekwa ngezindleko ezengeziwe. Ikhishi linegedlela, i-induction heater, i-microwave, i-toaster nesiqandisi. Izitsha zokushisisa induction ziyatholakala ukuze zisetshenziswe. Izitsha, izinto zokusika, izitsha zengilazi, izimbiza zokugqumisa, amakesi kasawoti kanye nopelepele, njll konke kuyatholakala ekhishini. Okubaluleke kakhulu ukuthi sihlala eduze nje, ngakho uma kukhona okudingekayo, siyojabula kakhulu ukwabelana nabanye.
4.50 · 22 okushiwo abanye
Kuyindawo ethulile kude nomsindo nothuli lomgwaqo omkhulu. Omakhelwane banemfudumalo futhi banobungane. Leli fulethi lisendaweni yomphakathi enamasango.
Izivakashi Ezithandekayo, Igama lami ngingu-Mamta Fomra. NginguMklami Wemfashini ngokomsebenzi futhi ngisebenze kusukela ngo-1995. nginesitolo eVishal- De- Mall, Madurai futhi ngidayisa ngegama lomkhiqizo we-MAMTA FOMRA. Ngifundisa izinhlobo ezihlukahlukene zobuciko njengokudizayina, ukudaya, ukuphrinta izingqimba, ukufekethisa futhi ngiziqinisekise ngokufanelekile ngeSikhungo sami okungukuthi - i-Mamta Fomra Institute of Fashion Management and Arts. Sinezifundo zeFashion Design with Innovation, Entrepreneurship and Management. Ngishadile futhi ngijabule futhi umyeni wami ungusozimboni. Ngibusiswe ngabantwana aba-2, sebeqedile ukufunda eNew Zealand futhi basebenza khona.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nami nganoma yiziphi izinsiza ezidingekayo kodwa ezingashiwongo ohlwini. Sizojabula kakhulu ukwelula.
Izivakashi Ezithandekayo, Igama lami ngingu-Mamta Fomra. NginguMklami Wemfashini ngokomsebenzi futhi ngisebenze kusukela ngo-1995. nginesitolo eVishal- De- Mall, Madurai futhi ngid…